Ny fitehirizana dizitaly dia ahafahana mamokatra aorian'ny famonoana aretina. NAB Show News | 2020 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny Media sy ny mpamokatra ny Kat Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Content Management » Ny fitahirizana nomerika dia ahafahana mamokatra aorian'ny famotehana
Ny areti-mandringana Covid-19 dia nahatonga ny orinasa mpamokatra paositra maro hiasa amina asa lavitra. Nahatonga fiovana tamin'ny fomba fitehirizana atiny media izany. Singa iray manan-danja iray dia ny fiankinan-doha bebe kokoa amin'ny fitehirizana rahona, na avy amin'ny foibe angon-drakitra tsy miankina na amin'ny alàlan'ny mpamatsy rahona hyperscale. Amin'ity lahatsoratra ity dia hijerena ireo vinavinantsika ho an'ny fitomboan'ny fitehirizana aorian'ny famokarana ary avy eo ny fanomezana sy ny fomba fijery avy amin'ny IBC 2020, ny 2020 Kat Show New York sy ny fampahalalana isan-karazany an'ny orinasa izay hanampy ireo fotodrafitrasa aorian'ny famokarana hanohy hiasa, hifehy ny vidiny ary hampitombo ny vokatra.
Ity sary etsy ambany ity dia mamaritra ny fangatahana isan-taona amin'ny fahafaha-mitahiry tahiry aorian'ny famokarana, ao anatin'izany ny NLE, ny fanaparitahana ny fahafaha-miraikitra mifamatotra sy ny tambajotra mifampitohy aorian'ny famokarana. Ampidirinay ny fizarana misimisy ny fitahirizana lavitra (cloud) ho an'ny fizotran'asa iaraha-miasa. Mariho fa noho ny areti-mandringana Covid-19 sy olona maro miasa ao an-trano mandritra ny ankamaroan'ny taona 2020 ary mety ho ampahan'ny taona 2021 dia manao tetik'asa lehibe amin'ny fampiasana tahiry rahona ho an'ny famokarana aorian'ny famokarana manomboka amin'ny taona 2020 raha oharina amin'ny taona 2019 (hatramin'ny 8% ka hatramin'ny 20% tsirairay avy) ary manohy mitombo hatramin'ny 2025.
Miaraka amin'ny fitomboan'ny fitahirizana rahona aorian'ny famokarana dia hojerentsika aloha ny fivoarana izay mampiditra ny fitehirizana rahona amin'ny alàlan'ny haino aman-jery sy fialamboly avy amin'ny mpivarotra isan-karazany.
Cloud Storage ho an'ny famokarana lavitra
mazotoNy vahaolana fitehirizana Nexis 2020 dia manome workflow iaraha-miasa na avy aiza na aiza amin'ny haino aman-jery manankarena. Izy io koa dia manome tahiry 40% zaraina bebe kokoa amin'ny dian-tongotra mitovy amin'ny fampiasana HDD avo lenta, manatsara ny fitaratry ny atiny hanafoanana ny fidinan'ny fotoana sy ny fahaverezan'ny data ary ny fitehirizana fitehirizana maivana izay mampifangaro ireo loharanon-karena sy rahona. Manome fanohanana misimisy kokoa ho an'ny fitaovana fahatelo.
Ny fahalianana amin'ny fampiasana ny rahona amin'ny alàlan'ny asa aorian'ny famokarana dia mitombo. mazoto nanao fanadihadiana ny mpanjifany tamin'ny taona 2020 talohan'ny nidiran'ny areti-mandringana Covid-19 ary nahita fa ny 20% -n'ny mpanjifa ihany no tsy mikasa ny hampiasa fitahirizana rahona, raha 40% kosa nilaza fa hampiasa latsaky ny 100TB, 30% kosa nilaza fa hampiasa 0.5-1PB ary 10% no nilaza fa hampiasa tahiry rahona mihoatra ny 1PB. Mampiseho ity sary etsy ambany ity mazotony laharan'ny vokatra fitahirizana an'izany mazoto Nexis / Cloudspaces mankany amin'ny fampidirana ny on-premises amin'ny fitehirizana rahona.
mazoto nilaza ihany koa fa nahavita fandefasana hazakazaka malefaka mazoto Media Composer amin'ny milina virtoaly sy mampiasa kaontenera Kubernetes ao anaty tontolon'ny fanovana, azo idirana amin'ny alàlan'ny Teredici, miaraka amin'ny fitahirizan-drakitra Nexis izay manome fanitsiana araka ny fangatahana aseho etsy ambany.
Scale Logic dia naseho teo Remote Access Portal, fitaovana 1U Linux izay ahafahana miditra lavitra amin'ny fitehirizana eo an-toerana ho an'ny fizotran'ny proxy sy ny vahaolana avo lenta, aseho etsy ambany. Mariho fa ny mpanjifa lavitra HDD na SSD dia azo ampiasaina ho cache ao an-toerana hanatsarana ny fahombiazany.
Ny fizotry ny synchonization dia mitranga ao ambadika nefa tsy mila manao na inona na inona ny tonian-dahatsoratra ary misy tetikasa voatahiry avy hatrany miala amin'ny tahiry eo an-toerana mba ho hitan'ny hafa ny fanovana.
Editshare dia nomena ny Kat Show valin'ny taona tamin'ny fihaonambe NAB NY 2020. Ny orinasa dia namoaka kinova vaovao an'ny rafitry ny rakitra EFS 2020 tamin'ny volana jolay 2020. Araka ny filazan'ilay orinasa, "Ny rafi-drakitra natao ho haino aman-jery dia manatsara ny fiarovana isaky ny sosona ary manatsara ny zava-bita manerana ny solaitrabe. Ho fanampin'ireo fitaovana fitantanana fitehirizana matanjaka natsangana tao amin'ny EFS, ny RESTful API vaovao dia manokatra varavarana ho an'ny mpanjifa sy ireo mpiara-miombon'antoka teknolojia hanodina ny fizotran'ny fitantanana fitahirizana mandroso amin'ny tontolo azo antoka. Mifanaraka tanteraka amin'ilay kininina farany an'ny FLOW, ny EFS dia ahafahan'ny fikambanana haino aman-jery manangana onjam-piaraha-miasa marobe, miaro ny olona mahay mamorona avy amin'ny fahasarotan'ny teknika ao anatiny ary manome ekipa teknika amina fitaovana fitantanana haino aman-jery feno. "
Ny kinova farany an'ny EFS dia manohana ny fizotran'ny rahona ao anatin'izany ny AWS, Tencent Cloud sy ny hafa. Ny talen'ny IT sy ny administratera dia mifehy tsara ny atiny, ny firafitry ny folder ary ny fikorianan'ny votoaty hahafahan'ny fiaraha-miasa tsaratsara kokoa manerana ny sehatry ny tranonkala maro sy tetikasa marobe.
EditShare nilaza ihany koa fa nanampy ny fampielezam-peo sy ny orinasan-tserasera hampiakatra ny vokatra famokarana votoaty lavitra miaraka amin'ny fitehirizam-bokin'ny EFS sy vahaolana amin'ny fitantanana haino aman-jery FLOW. Nilaza ny orinasa fa nandritra ny areti-mandringana dia nametraka ny vahaolana fiaraha-miasa amin'ny comnpany ny orinasa Long Long Telephone (PLDT) mba hamerenany ny fivezivezena mihoatra ny 50 ary hampiakarana ny vokatra ateraky ny famokarana lavitra hatramin'ny 40%. Ny sary eto ambany dia mampiseho ny famokarana paositra lavitra mampiasa EditShare entana
Facilis dia tamin'ny virtoaly 2020 Kat Show NY. Facilis manome tahiry fifampizarana avo lenta amin'ny famokarana haino aman-jery fiaraha-miasa. Ny fivoaran'ny orinasa vao haingana dia misy ny kinova 8.05 an'ny Facilis Shared Storage Systems, kinova 3.6 an'ny rindrambaiko FasTracker Media Asset Management ary ilay vaovao Facilis Edge Sync hahazoana fidirana lavitra ho an'ny fampisehoana.
The Facilis Ny Shared Storage Version 8.05 dia ahitana ny laharam-pahamehana voafaritry ny bandwidth, ny tiering SSD ary ny parity multi-disk. Bandwidth Priority dia mamoaka fitiliana feno amin'ny toeram-piasana rehetra mandritra ny fiasa ara-dalàna fa manome laharam-pahamehana ireo toeram-piasana hitazomana ny fidirana bebe kokoa rehefa miditra amin'ny fepetra mavesatra be ny mpizara. Ity sehatra laharam-pahamehana ity dia mavitrika ary mety hisy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny mpanjifa ao anatin'ny segondra aorian'ny fampiharana.
Ny Parity Multi-disk voafaritry ny lozisialy dia azo alefa hatramin'ny tsy fahombiazan'ny kapila 4 isaky ny vondrona mpamily, mifototra amin'ny tetik'asa, volavolan-dalàna virtoaly. Ity teknolojia ity dia mamela ny tompon'ny rafitra antitra hiaro tsara kokoa ny fananany amin'ny fahaverezan'ny data noho ny tsy fahombiazan'ny fiara. Ny tiering SSD sy HDD dia novolavolaina mba hanomezana haingam-pandeha natokana ho an'ireo tetikasa mila fahombiazan'ny haavon'ny SSD, ary mitazona fitaratra maharitra HDD.
Facilis Edge Sync dia manomboka amin'ny Facilis Rindrambaiko object Cloud izay mampiasa teratany Facilis habetsaky ny virtoaly ho toy ny cache kapila eo an-toerana ary manampy tahiry Azure Cosmos DB natokana mba hampifanarahana ny birao marobe amin'ny rafitra rakitra iray. Miaraka amin'ny Facilis Edge Node napetraka amin'ny toerana lavitra, ny lalan'ny fisie media sy ny fisie projins dia mitovy tanteraka, na miasa any amin'ny toeran-trano ianao na any an-trano. Izay fanovana na fanampina ireo rakitra ho an'ny tetikasa dia havaozina avy hatrany isaky ny toerana. Ny sary etsy ambany
Niara-niasa tamin'ny Cinesite Qumulo ary ny AWS hamela ny sary mihetsika sy ny fantsona VFX hampiasa QumuloSerivisy data tahiry hybrid handefasana horonantsary 16K vita. Rehefa miatrika olana momba ny hatsiaka tampoka amin'ny fomba fampiasa Custerite fitahirizana entana vao haingana novidiana Qumulo, izay nanaparitaka haingana ny node hardware tamina tranokala ary nampandeha indray ilay orinasa.
Taty aoriana, mba hipoka amin'ny rahona handanjana ny fahaizany manome azy, dia nihena ilay orinasa Qumulo fitehirizana rahona izay namela ny fikambanana hikodinkodina masinina sy hitahiry angona ao amin'ny AWS. A Qumulo tranga fandinihana milaza fa “QumuloNy lozisialy rakitra hybrid dia mihazakazaka ny rafitra rakitra mitovy amin'ny rahona sy ny rahona ary ny data dia azo averina am-pitoerana tsy misy fotony eo anelanelan'ny tranga na manerana ny faritra. Ny fipoahana hatramin'ny 20, 200, na koa 2,000, dia manome node avo lenta amin'ny AWS miaraka amin'ny Qumulo ny manara-dalàna amin'ireo hery rehetra ireo dia tsy olana. Ny tranga dia azo ahodina ao anatin'ny minitra vitsy ary potipaka haingana tahaka izany koa. "
Integrated Media Technologies (IMT) dia nanambara fa ny rindrambaiko SoDA dia nampidirina niaraka tamin'ny Dalet's Ooyala Flex Media Platform mba hanatsorana ny famindrana azo antoka ny atiny artifisialy sy ny fianarana milina worlflow ao anaty rahona. Ny fampidirana ny rindrambaiko IMT SoDA sy ny Dalet's Ooyala Flex Media Platform dia atolotra any Etazonia sy Eropa.
Ny vahaolana iraisana dia hiatrehana ireo fitakiana fitantanana data momba ny fananana haino aman-jery amin'ny alàlan'ny fanalefahana ny famindrana ireo fizotran-drakitra marobe mandritra ny famoahana fomba fanodinam-bola tsotra ho an'ny atiny famoronana. Ny mpanjifa taorian'ny famokarana sy ny serivisy dia afaka maminavina ny vidiny sy ny fotoana hamindrana ireo rakitra mampiasa SoDA alohan'ny famindrana tahiry, ahafahan'izy ireo mandray fanapahan-kevitra hendry amin'ny fitantanana angona sy hitazona ny vidin'ny tetikasa amin'ny teti-bola na ambany.
Ny fitomboan'ny fiankinan-doha amin'ny rahona miaraka amin'ny asa fiaraha-miasa lavitra dia hitombo amin'ny taha ambony kokoa aorian'ny nifaranan'ny traikefa nahafaty olona ankehitriny. Na amin'ny rahona na amin'ny toerana, ny vahaolana fitehirizam-bokatra mivaingana isan-karazany dia hanampy ireo mpamoaka lahatsoratra hiatrika ny habetsaky ny atiny video mitaky fitahirizana fampisehoana ambony kokoa hanomezana ny traikefa tena izy izay takian'ireto matihanina ireto. Andao jerena ny sasany amin'ireo vahaolana farany fitahirizana fanjakana mafy orina ho an'ny indostria M&E.
Vahaolana mitahiry fanjakana
Ny Cloud Manager an'ny NetApp dia manome fitantanana mitarika ny fitahirizana fampiharana sy angon-drakitra amin'ireo mpamatsy rahona marobe sy toerana eo an-toerana. The Spot by NetApp Product Suite manome analytics momba ny fotodrafitr'afo, fanatsarana ny vidiny, fanatsarana ny fahaiza-manao ary fanamafisana ny enta-mavesatra ho an'ireo kaontenera Kubernetes. Ny ONTAP 9.8 an'ny orinasa dia manome fitomboan'ny rahona fampidirana sy fisian'ny data ho an'ireo rindranasan'ny orinasa. ONTAP 9.8 dia manome maritrano firaketana rahona hybrid hybrid, misy tsy tapaka ary fitantanana angon-drakitra mirindra noho ny SAN, NAS ary ny fitehirizana zavatra.
NetApp dia nanohana ny sarimiaina Dreamworks efa ela, izay mitaky fandanjalanjana ny fahafaha-mitahiry sy ny fahombiazany. Ny FAS500f vaovao (aseho etsy ambany) dia ny fitahirizam-bokatra mitodika rehetra (hatramin'ny 734TB fahaiza-manao miaraka amina talantalana fanitarana) amin'ny fampiasana QLC flash SSD mba hanomezana fahafaha-manao ambony. Ity vokatra ity dia nifarana tamin'ny famaranana ny fanohanana NVMe ary tantanan'ny rindrambaiko ONTAP an'ny NetApp. Ny vokatra dia kendrena amin'ireo fampiharana angon-drakitra tsy voarindra volavola toa ny haino aman-jery sy ny fialamboly ary ny sarimiaina.
Tamin'ny taona 2020 IBC ATTO dia nampiseho ny fitaovana fitehirizan'izy ireo miorina amin'ny SiliconDisk RAM, avo lenta avo lenta, miaraka amina 128GB sy 512GB. Amin'ny fampiasana RAM, fa tsy fahatsiarovana tselatra, ity vokatra ity dia manome fampisehoana avo kokoa, amin'ny vidiny iray.
Ity vokatra ity dia manome latency latsaky ny 600 ns ary hatramin'ny 6.4M 4K IOPS ary ny bandwidth transfer data hatramin'ny 25 GB / s. Izy io dia miaraka amin'ny seranan-tsambo Ethernet 4 100 Gb ho an'ny bandwidth 400Gb total. Araka ny filazan'ny orinasa, "Ny tahiry dia voatahiry avy hatrany ary alaina haingana miaraka amin'ny hafainganam-pandeha tsy mampino mamela anao hanova stream maro kokoa, haka tranga data bebe kokoa ho an'ny AI / ML, hanodinkodina haingana kokoa ny angona angon-drakitra, ary hanome fahombiazana mahomby amin'ny fizahana index."
Ny SiliconDisk dia misy mpanamory fotoana tena izy izay manome analytics amin'ny fahombiazan'ny tamba-jotra fitahirizana, ny fampiasana tahiry ary ny fahombiazan'ny angona SiliconDisk. Izy io koa dia manana xCORE I / O haingam-pandeha, mamaky sy manoratra miaraka amina aotra fanampiny fanodinana eo amboniny. Ary koa, amin'ny fampiasana DRAM, fa tsy fahatsiarovana tselatra, ny rafitra dia tsy mila mitantana fitafiana haino aman-jery.
Nanambara i Excelero fa ny DigitalFilm Tree dia nampiasa ny fitehirizana NVMe elastika (NVMesh) hanomezana fanodinana 10X haingana kokoa sy fitehirizana 100X haingana kokoa. Araka ny filazan'ny orinasa, “ny rindrambaiko narafitra voafaritry ny rindrambaiko NVMesh ho an'ny asa fampidinana compute avo lenta dia manome hery ny mpampiasa amin'ny fitehirizana tsaratsara kokoa. Ny mpanjifa dia mahazo tombony amin'ny loharanom-pahalalana NVMe zaraina manerana ny tambajotra, fidirana amin'ny fanesorana NVMe amin'ny hafainganam-pandeha eo an-toerana - sy ny fahombiazana izay mihoatra ny fetran'ny flash ao an-toerana amin'ny mpizara.
Ao amin'ny NVMesh, ny data-path dia mihazakazaka eo amin'ny lafiny client ihany, tsy misy tsingerina CPU amin'ny lafiny mpizara. Tena mahaliana ity ho an'ny fampiharana hyperscale satria tsy misy tabataban'ny tabataba. Singa iray manan-danja amin'ny maritrano NVMesh ny TOpology MAnager (TOMA), singa fitantanana cluster manan-tsaina izay manome ny fiasan'ny fiaramanidina fanaraha-maso ary mamela ny serivisy data toy ny RAID, ny famafana famafana ary ny fizarana data (eo amin'ireo milina mpanjifa). Ny lalan'ny angona mahomby mivantana avy amin'ny fampiharana mankany amin'ny fitehirizana NVMe dia aseho amin'ny sary etsy ambany.
Ohatra iray amin'ny NVMesh any am-piasana, ny ekipa mpamokatra Famerenam-bola voalohany: ao anatin'ireo zazalahy, seho alohan'ny fizarana 2 an'ny andiana maherifo an'i Amazon Prime Video The Boys, Ny rafitry ny DFT dia niatrika fitsapana ny vahaolana fitehirizana herinaratra Excelero vaovao. Ny ekipan'ny famokarana dia mila manamboatra dailies 40-upload an'ny mpanjifa mandritra ny 10 ora, manohana azy ireo, manao proxy ho an'ny fanovana haingana, manamboatra azy ireo ary manome azy ireo any amin'ny departemanta fanonta - ao anatin'ny XNUMX ora fotsiny.
VAST dia manolotra izay nantsoiny hoe Data Universal Storage izay ampiasaina Intel Optane NVMe SSD ho toy ny takelaka cache ho an'ny takelaka fitehirizana QLC NVMe aseho etsy ambany. Nilaza ny orinasa fa ity firafitra fitehirizana entana ity dia manome tahirim-bola lafo vidy avo lenta izay ampiasaina amin'ny studio fanaovana sary mihetsika, ligim-panatanjahantena ary fampielezam-peo.
Tamin'ny nanombohan'ny IBC, Cloudian dia nanambara fa ny rindrambaiko fitehirizan-drakitra HyperStore dia optimised optimized ankehitriny, ahafahan'ny orinasa mahafeno ny filan'ny asa be atao eo am-panatanterahana sady mametaka teboka miorina amin'ny flash sy HDD miaraka amina maritrano hybrid adaptatera ahafahan'ny mpanjifa mampihena ny totaliny mitentina 40% amin'ny alàlan'ny fampidinana data tsy dia be loatra ampiasaina amin'ny tahiry HDD. HyperStore dia azo alaina ho vahaolana rindrambaiko irery na amin'ny fitaovana efa namboarina mialoha, ny andiany HyperStore Flash 1000. Ny HyperStore Flash 1000 dia manome tanjaka 77TB sy 154TB amin'ny endrika 1U endrika ary aseho eto ambany.
Araka ny voalazan'ny orinasa, “ny rindrambaiko vaovao namboarina notarafin'i Cloudian dia manome ny zava-bita ilaina ary manome ny tombony rehetra ny sehatra fitehirizan-javatra Cloudian's grade-sehatra, ao anatin'izany ny fifanarahan'ny S3 an-toerana, ny fiarovana amin'ny indostria ary ny endrika fitantanana mandroso toa ny fivelarana sy toetra-of-service. HyperStore nohavaozina noho ny hazavana dia manararaotra ny mombamomba ny I / O miova amin'ny haino aman-jery tselatra amin'ny fantsom-pitaovan'ny indostrialy, mamaky ny fizarana zavatra vitsivitsy ary ny fidiran'ny angon-drakitra ambany amin'ny ambaratonga. Ny sehatr'i Cloudian dia voamarina miaraka amin'ireo mpamatsy NVMe toa Intel ary Kioxia ary i Intel Vonona Optane ho an'ny fampisehoana lehibe kokoa. ”
Open Drives dia nanambara ny fisian'ny sehatra rindrambaiko Atlas 2.1 izay manome hery ny vahaolana fitahirizana OpenDrives. Ny rindrambaiko vaovao dia miasa eo amin'ny sehatr'asa Ultra Hardware navoakan'ny orinasa, aseho etsy ambany, izay misy NVMe SSD ao anatin'ny vokatra Ultimate ary voalanjalanja amin'ny HDD amin'ny vokatra Optimum. Ireo dia aseho etsy ambany ary koa ny vokatra array Momentum HDD.
Atlas 2.1 dia manana fiasa mamela ireo orinasa hivezivezy be dia be ary mitazona ny zava-bitan'ny ambaratonga. Ireo endri-javatra ireo dia ahitana: clustering fitehirizana, rafitra rakitra zaraina, fitoeram-bokatra, mandeha ho azy misy fepetra, fitantanana sy fahitana ifantohana, fanohanana fitahirizana rahona, ary fahazoana avo.
Ny Clustering Storage dia mamela ny fitaovana arak'olon-tokana, na node, hiangona miaraka mamorona cluster. Ity marindrano zaraina mirazotra ity dia mamela ny asa aman-draharaha voalanjalanja eo amin'ireo node cluster nefa tsy mahafoy ny fiakarana an-tsehatra toy ny fitomboan'ny latency.
Ny Containerization dia mitondra fiasa toy ny compute sy ny fampiharana izay manakaiky kokoa ny toerana ipetrahan'ny angona tahiry. OpenDrives nanatona containerization avy amin'ny fomba fijery fitehirizana. Amin'ny alàlan'ity, nilaza ny orinasa fa OpenDrives dia afaka mahatratra tombony lehibe amin'ny alàlan'ny fandefasana an-tsokosoko ireo angona ho an'ny kaontenera.
Ny automatisation Conditional dia singa mifameno amin'ny fitoeran-javatra, ahafahana manao hetsika, toy ny hetsika mifototra amin'ny fotoana na miorina amin'ny rakitra, hamoronana asa mandeha ho azy izay mandoro sy miasa tsy miankina amin'ireo asa hafa. Ny fitantanana sy ny fahitana afovoany amin'ny alàlan'ny vera tokana dia manome fahitana ho an'ny mpandraharaha ny fahombiazan'ny fotodrafitrasa fitehirizana ary manampy amin'ny fikirakirana tsara kokoa ny toe-javatra hanamafisana ireo node sy ny clusters fitehirizana.
Ny fanohanana ny cloud storage dia ahafahan'ny mpampiasa mandefa sy mandray ny angon-drakitra anatiny sy ny angona rahona amin'ny alàlan'ny protokol S3 ary mizara lasibatra lavitra S3 amin'ny alàlan'ny Service Message Blocks (SMB) eo an-toerana. Ny fahafaha-manana betsaka dia mitantana ny fitohizan'ny asa mba hahafahan'ny mpanjifa manamboatra node standby mihetsika rehefa maty ny fitaovana voalohany.
Ny rahona sy ny fitahirizam-panjakana dia manova ny fomba fiasanay amin'ny atiny media. Saingy ho an'ireo matihanina miasa ao an-trano na amin'ny toerana kely dia afaka manome fampisehoana ambony indrindra ny fitehirizana eo an-toerana. Andao jerena ireo tolotra fitehirizana vaovao sy havaozina eo an-toerana ho an'ny fampiharana M&E.
Vokatra fitahirizana workflow eo an-toerana
Promise Technology dia nanolotra ny PegasusPro, tao amin'ny 2020 IBC, rafitra Thunderbolt 3 DAS sy NAS fusion hanatsarana ny fahombiazan'ny workflow amin'ny fiaraha-miasa amin'ny haino aman-jery nomerika. Ny vokatra dia manome famindrana data haingana avy any DAS mankany 10GbE NAS ary vise-versa amin'ny fampiasana ny teknolojia FileBoost an'ny orinasa. Nilaza ny orinasa fa olona maro no afaka mifandray mivantana amin'ny PegasusPro amin'ny alàlan'ny Thunderbolt 3 ary mizara ny asany miaraka amin'ireo mpandray anjara amin'ny ekipa hafa amin'ny NAS. Ny tsipika vokatra PegasusPro dia aseho etsy ambany.
Seagate dia manolotra ny EXOS HDD JBODs ary koa ny jiro flash Nytro All.
Ny One Stop Systems dia nanao fitsidihana tranokala virtoaly tamin'ny taona 2020 IBC. Nilaza ny orinasa fa, "mamolavola sy manamboatra rafitra manampahaizana manokana ho an'ny indostrian'ny haino aman-jery, fialamboly ary sary an-tsary, mampiasa ny herin'ny PCI Express, ny mpandefa GPU haingana indrindra ary ny fitehirizana NVMe mihazakazaka mampihatra fangatahana compute ao anatin'izany ny famoahana farany frame, hetsika lehibe sary an-tsaina, zava-misy nitatra ny fotoana ary famokarana horonantsary AI nohatsaraina. Ny fanolorana OSS dia ahitana ny PCIe Gen 4 miorina amin'ny indostria izay manome mpandeha haingana sy mpamoaka horonantsary miaraka amin'ny indroa ny fantsom-pifandraisana misy ary hatramin'ny 16 NVIDIA A100 GPU ao anaty rafitra iray. OSS dia manolotra ny AI amin'ny Fly ™ mitondra ny fahombiazan'ny datacenter ho an'ny onjam-piasana eo an-toerana sy ao amin'ny studio. ”
Synology dia nanambara ny DS1621xs + tamin'ny IBC 2020. Araka ny filazan'ny orinasa, "ny DS1621xs + dia mizara ilay processeur mahery Xeon hita amin'ny fitaovana ivon-toerana data Synology hafa. Maherin'ny 3.1 GB / s. vakio ary 1.8 GB / s. manoratra zava-bita dia midika hoe afaka mamaha angon-drakitra lehibe kokoa sy mitantana mpampiasa betsaka kokoa, amin'ny hafainganam-pandeha hafainganam-pandeha miavaka. Izy io koa dia ampiarahina amin'ny fahatsiarovan'ny ECC ho an'ny fiankinan-doha faran'izay betsaka, ary raha ampifandraisina amin'ny Btrfs sy ireo safidy backup hafa feno dia azo antoka ny mpampiasa fa azo antoka ny data. ” Ny vokatra dia aseho etsy ambany.
Ny heno HDD 3.5 an-anatiny enina dia ahafahan'ny 96TB manana tahiry fitehirizana manta. Ireo singa fanitarana dia mamela ny fampitomboana izany amin'ny 16 bay sy ny fahafaha-manao 256TB. Ny 10GbE NIC fanampiny dia afaka manafaingana ny fandikana tetikasa na manome famindrana haingana kokoa ho an'ny milina virtoaly marobe. Ny vokatra dia manome serivisy NAS eo an-toerana, na dia mamela fidirana lavitra amin'ny tranokala na rindrambaiko finday aza.
Symply dia nampiditra ny SymplyWORKSPACE nohavaozina ho an'ny IBC virtoaly 2020, rafitra fitehirizam-bokatra misy mpampiasa Thunderbolt 6 SAN misy birao mahery an'ny StorNext3 miaraka amina axle ai 2020 fitantanana fananana haino aman-jery AI mifototra amin'ny fahafaha-mitahiry hatramin'ny 48 TB ka hatramin'ny 366 TB, aseho etsy ambany. Nilaza ny orinasa fa ity ekipa ity dia afaka manohana mpampiasa 8 miaraka miara-miasa amin'ny asa 4K ary manohana ny fidirana lavitra, mba hahafahan'ny mpampiasa miditra amin'ny proxy amin'ny rafitr'izy ireo avy any an-trano. Ny fiarovana Adv aced RAID dia manampy amin'ny fiarovana ny fananan'ny haino aman-jery ary ny fampiasana fitehirizana fanjakana mafy orina dia manampy amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny rafitra ankapobeny. Ny axle ai dia mihazakazaka amin'ny milina virtoaly Linux amin'ny processeur WORKSPACE Xeon.
Ny Tatitra nomerika nomerika amin'ny Media sy ny fialamboly amin'ny taona 2020
The 2020 Digital Storage for Media and Entertainment Report, avy amin'ny Coughlin Associates, manome pejy 251 fanadihadiana lalina momba ny andraikitry ny fitahirizana nomerika amin'ny lafiny rehetra amin'ny haino aman-jery sy fialamboly matihanina. Ny vinavina dia omena ny 2025 ho an'ny fangatahana fitahirizana nomerika amin'ny fisamborana atiny, ny famokarana aorian'ny famoahana, ny fizarana atiny ary ny fitahirizam-boky dia omena amin'ny tabilao 62 sy isa 129.
Ny tatitra dia nahazo tombony tamin'ny fidirana avy amin'ny manam-pahaizana maro amin'ny indostria ao anatin'izany ny mpampiasa farany sy ny mpamatsy tahiry, izay miaraka amin'ny fanadihadiana ara-toekarena sy ny famoahana indostrialy ary ny fanambarana, dia nampiasaina hamoronana ny angon-drakitra tafiditra ao anatin'ilay tatitra. Vokatry ny fiovana eo amin'ny toekarena amin'ny fitaovam-pitehirizana fitaovana fitehirizam-bokatra avo lenta dia handray anjara lehibe kokoa amin'ny ho avy. Ny rahona sy ny fitehirizana hybrid, anisan'izany ny rahona, dia manana lanjan-danja vaovao amin'ny dalam-piasana maro mandritra ny areti-mandringana Covid-19. Rehefa mandalo ny areti-mandringana dia hitombo hatrany ny fampiasana tahiry rahona amin'ny tsenan'ny fampitam-baovao sy fialamboly mandroso.
Afaka mahita bebe kokoa ianao ary manafatra mivantana amin'ny tomcoughlin.com/product/digital-storage-for-media-and-entertainment-report/
 2020 fitehirizana nomerika amin'ny haino aman-jery sy fialamboly, Coughlin Associates, tomcoughlin.com/product/digital-storage-for-media-and-entertainment-report/
Tom Coughlin, filoham-pirenena, Coughlin Associates dia mpanadihady dizitaly ary mpanadihady momba ny fandraharahana sy ny teknolojia. 39 taona mahery izy tao amin'ny indostrian'ny fitahirizana angon-drakitra miaraka amin'ny toerana injeniera sy fitantanana amin'ny orinasa maromaro. Coughlin Associates dia nanontany, namoaka boky sy tatitra momba ny tsena ary ny teknolojia ary nametraka hetsika mifantoka amin'ny fitahirizana nomerika. Mpandray anjara fitahirizana sy fitadidiana tsy tapaka izy forbes.com ary tranokala fandaminana M&E. Izy dia mpiara-miasa amin'ny IEEE, Filoham-pirenen'ny IEEE-USA ary miasa amin'ny SNIA ary SMPTE. Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba an'i Tom Coughlin sy ireo zavatra vita an-tsoratry ny asany dia mandehana www.tomcoughlin.com.
Previous: Ny Densitron's Intelligent Display System dia manolotra fanaraha-maso studio “malefaka be” ho an'ny NEP The Netherlands
Next: Ultimate RV Show mandeha virtoaly, vahaolana amin'ny haino aman-jery mahazatra dia manome atiny 49 Ora miaraka amin'ny FOR-A Switcher